Akụkọ - Kedu ka ndị na-eme nchọpụta sayensị nwere ike isi wepụta oge iji sachaa karama ahụ mgbe etinyere ya na ụlọ nyocha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 10 kwa ụbọchị?
Pasent nke oge ndị nchọpụta na-etinye na ụlọ nyocha kwa ụbọchị
Foto dị n'elu bụ ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nyocha sayensị na ụlọ nyocha otu ụbọchị, nke 70% nke oge na ụlọ nyocha na-eme nyocha, ịgụ akwụkwọ, na ide akụkọ ihe karịrị awa asatọ, na ọbụna 17.5% nke sayensị. nnyocha “Refeyim” ruru ihe karịrị awa iri na otu.Yabụ kedu ka ị ga-esi wepụta oge iji hichaa karama iko na efere ejiri mee nnwale otu ụbọchị?Kedu ka esi achọpụta na mgbe otu ụbọchị nyocha sayensị siri ike, karama na efere ndị a na-asacha nwere ike izute ụkpụrụ nhicha, ka ọ ghara imetụta nnwale ọzọ?
Tinye brọsh na karama dị n'aka gị, gbanyụọ ọkpọkọ, wee lelee yaakpaka glassware washer.Ị ga-akwa ụta na ị nweghị ike ijilaabu glaasi ihe washermbụ!
Nhazi modul nke modul, mkpokọta n'efu
Ajụjụ: E nwere ọtụtụ ụdị karama na ụlọ nyocha anyị, gụnyere volumetric flasks, beakers, sample injection vial, wdg bụ otu.glassware washernwere ike gboo mkpa nhicha ndị a n'otu oge?
Azịza: N'ezie, naIgwe na-asa ụlọ nyochana-anabata ụkpụrụ modular.Enwere ike ịgbanwe modul nhicha dị ka ụdị karama a ga-ehicha.Maka ọnọdụ ihicha dị iche iche, usoro ahụ nwere mmemme edoziri 35 na otu narị mmemme arụnyere n'ime nhazi.Usoro ihe omume na-aghọta n'ezie ihe ọ bụla ị chọrọ na ike dakọtara free.
Ngwakọta ogwe aka ịgbasa na imi ntụtụ n'otu n'otu
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro nhicha nkeIgwe ihe nchacha ụlọ nyocha?Kedu otu ị ga-esi hụ na enwere ike ihicha ya?
Azịza: Ụlọ elu na nke dị n'okpuru na-eji ogwe aka ịgbagharị abụọ 360 ° na-atụgharị iji hichaa elu elu nke karama na efere, a na-ejikwa nozzles injection otu-na-na-eji hichaa ime elu nke karama na efere, ya mere, dị ka. iji nweta ihe niile ihicha nke ime na mpụta nke karama na efere..Kedu ka esi achọpụta na enwere ike ihicha ya?Usoro ihicha ahụ gụnyere ịsacha tupu, ịsacha alkaline isi, neutralization acid, na ikpocha mmiri dị ọcha.Nhọrọ conductivity nlekota na usoro ngwa nbipute na-enye ezigbo oge data iji nweta irè ihicha karama na efere na data ndekọ na tracing.
Njikwa microcomputer na teknụzụ njirimara nkata na-echekwa ego ihicha nke ukwuu
E jiri ya tụnyere nhicha akwụkwọ ntuziaka, ọnụ ahịa ihicha igwe nwere ike ịchekwa ihe dịka 1/2.
Ịkpọsa n'ime ebe na ọrụ mmeghe ọnụ ụzọ na-akpaghị aka na-eme ka atụmatụ mmadụ dị
Ajụjụ: Ọ bụ naanị ihicha?Enwere atụmatụ ọ bụla?
Azịza: Iji gboo mkpa nke ndị ọrụ maka ihicha mgbe ihichachara, a pụrụ ịkwado ngwá ọrụ na-arụ ọrụ ihicha n'ime ọnọdụ.Mgbe ihichachara, ọ nwere ike ịbanye na usoro ihicha ozugbo dị ka achọrọ.Ejiri owu nzacha HEPA nwere okpukpu abụọ iji hụ na ihicha ya.Ịdị ọcha nke ikuku na usoro.Mgbe ihicha na ihicha, ọnụ ụzọ ga-akpaghị aka na-emeghe na otu ọnọdụ maka otu nkeji site ITL induction technology iji belata okpomọkụ n'ime oghere mgbe ihicha na ihicha.Gbochie ndị ọrụ ka ikuku na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na-akọwapụta atụmatụ mmadụ.
Ụzọ nke nchọpụta sayensị dị ogologo, naglassware washerga-eso gị!
Oge nzipu: Ọktoba 21-2021